Warqadda shaqada looga joojiyo cadaalad darada edbinta iyo noocyada shaqada laga eryo | Dhaqaalaha
Xil ka qaadista waxaa lagu qeexaa sida go'aanka maamulaha, loo shaqeeyaha ama loo shaqeeyaha uu ku joojiyo xiriirka shaqo ee ka dhexeeya isaga iyo shaqaalaha.
1 Xil ka qaadistaan ​​waxaa loo kala saari karaa iyadoo loo eegayo astaamaha qaarkood:
2 CEEBINTA ANSHAXA:
3 UJEEDDADA UJEEDADA.
4 XIL KA QAADISTA SHAQAALAHA.
5 Ka dib markii la ceyriyay, suurtagal ma tahay in la helo shaqo la'aan?
6 XIL KA QAADIS LA'AAN.
Xil ka qaadistaan ​​waxaa loo kala saari karaa iyadoo loo eegayo astaamaha qaarkood:
Cayrinta edbinta: Markuu shaqaaluhu ku sameeyo jebin culus shaqada.
Ujeeddada shaqada Markuu loo shaqeeyuhu go'aansado inuu joojiyo xiriirka shaqada oo uu joojiyo qandaraaska shaqaalaha oo uu ku caddeeyo ceyrinta sababo badan oo ujeeddo leh.
Cayrin wadareed: Marka ujeeddada shaqada laga eryo ay saameyn ku yeelato dad aad u tiro badan oo ka tirsan isla shirkad.
Xilka ka qaadis aan cadaalad ahayn Marka loo shaqeeyuhu uusan muujinin jebinta shaqada ee dhanka shaqaalaha, taasi waa, shuruudaha rasmiga ah ee shaqada looga ceyrinayo lama buuxinayo.
Hoos waxaan ku sharixi doonaa mid walba iyo astaamahiisa si faahfaahsan iyo tusaalayaal si aad u kala duwanaan karto oo aad si fiican u fahmi karto.
Ceyrinta noocan ah waa marka loo shaqeeyuhu, sabab la aan anshax marinta ama jebinta culus, uu gaaro go'aanka lagu joojinayo xiriirka shaqo ee ka dhexeeya labadooda.
Marka loo eego qodobka 54 ee sharciga 'shaqaalaha, ficilada soo socda waxaa loogu yeeraa jebinta shaqada culus:
1. Maqnaansho aan cudurdaar lahayn oo soo noqnoqda, sida inaad shaqada ka soo daahdo.
2. Anshax xumo ku timaadda shaqada oo aan loo hoggaansamin xeerarka ka dhex jira goobta shaqada.
3. Dagaal gacan ka hadal ama hadal ah oo loo geysto loo shaqeeyaha ama qof kasta oo la shaqeeya iyo waliba ehelka uu la nool yahay.
4. Marka ay jirto xadgudub ku saabsan kalsoonida shaqaaluhu u qabo loo shaqeeyaha.
5. Ka gaabinta u hogaansamida shaqadii lagu heshiiyey waqtiga shaqaalaynta ama in waxqabadka tan markasta sii yaraado.
6. Isticmaalka aalkolada ama daroogada taas oo markaa saameyn ku yeelata shaqada shaqaalaha shaqaalaha.
7. Dhibaateynta galmada ee shaqaalaha ama loo shaqeeyaha iyo takoorida ku saleysan jinsiga, nooca galmada, da'da, diinta, iyo kuwa kale, ee ka dhanka ah qof kasta oo la shaqeeya.
Tusaalaha warqada shaqada ka joojinta edbinta.
Luis wuxuu ka shaqeeyaa makhaayad. Wax ka yar bil ka hor ayuu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo mid ka mid ah shaqaalihiisii ​​ay wada shaqeyn jireen; Sababtaas awgeed, cunaqabateyn ayaa lagu soo rogay Luis halka lagu caddeeyay inuu galay dambi culus, waxaa laga joojiyay shaqada 10 maalmood mushaar la'aan. Laakiin usbuuc ka hor goobta ayaa lagu soo celiyay saaxiibkiis kale, laakiin markan wuu sii dheeraaday wuuna garaacay. Sababtaas awgeed, shirkaddu waxay go'aansatay inay doorato eryidda edbinta ee laga codsaday Luis oo ah inuu si jir ahaaneed u weeraray shaqaale ay wada shaqeeyaan.
Laakiin tani halkan kuma eka, maxaa yeelay tan nooca heshiisyada wadajirka ah Waxay had iyo jeer leeyihiin qayb loogu talagalay anshax xumo iyo ciqaabteeda u dhiganta iyo halka, markay dhacdo anshax xumo aad u daran, waxaa lagu ciqaabi karaa ceyrinta edbinta ee shaqaalaha.
Este nooca eryida edbinta, sidoo kale waxaa loo qaadan karaa inay tahay mid ku habboon, aan la aqbali karin ama aan waxba ka jirin.
Xil ka qaadis. Marka sababaha ama cudurdaarrada lagu sheegay warqadda xil ka qaadista si buuxda loo muujiyo. Marka lagu daro xaqiiqda ah in loo shaqeeyuhu uusan bixin doonin nooc kasta oo magdhow ah shaqaalihiisii ​​hore.
Xilka qaadis aan cadaalad ahayn. Marka sababaha lagu sheegay warqadda xil ka qaadista aan la caddeyn karin marka lagu daro iyadoo aan la raacin shuruudaha sida rasmiga ah sharcigu u baahan yahay. Xaaladdan oo kale, loo shaqeeyuhu waa inuu kala doortaa inta udhaxeysa shaqada inuu ku celiyo shaqaalihiisa ama magdhaw siiyo, hadduu doorto tan dambe, waa inuu siiyaa 33 maalmood oo mushahar sanadkiiba ah oo uu shaqeeyay, iyadoo xaddidan ay tahay 24 lacag bixin bille ah.
Shaqo ka saarid Marka ay jirto takoor nooc kasta ah, tusaale ahaan: cayrinta inaad ku dhaqantid diin kale, dookhaaga galmada, midabka maqaarka ama muuqaalka guud ahaan. Qofka shaqaalaha ah waa in dib loo soo celiyo, isaga oo la dhigayo isla meeshuu ka shaqeeyey, taas oo ay u sii dheer tahay in la siiyo mushaharkii uu ka joojiyey qaadashadiisa laga soo bilaabo maalintii shaqada laga eryey.
Waa nooca shaqada ka joojinta ee heshiiska shaqada loo joojiyo sababo dhaqaale ama abaabul ama farsamooyin wax soo saar ee shirkaddu leedahay.
Sababaha la sheegay ayaa lagu aasaasay qodobka 52 ee ET.
Tusaalaha warqadda joojinta ujeeddada.
Laura waxay ka shaqeysay shirkad soo saarta dharka, laakiin bishii Juun 11keedii qandaraaskeedu wuxuu kudhamaaday ujeeddo shaqada laga eryay awgeed, kiiskanna waxaa lasiiyay warqad, halkaas oo shirkadu ay ku eedeysay sababo dhaqaale, tan iyo markii ay sheegtay in shirkadu ay marayso marxalad qasaaro joogto ah 5 sano.
Si la mid ah ceyrinta xaq darrada ah, cayrinta si ula kac ah, waxay u noqon kartaa mid haboon, cadaalad daro ah ama aan waxba ka jirin, haddii shaqaaluhu codsado in laga caawiyo garsoorka macnahiisu yahay inuu caqabad sameeyo
Shaqo ka joojinta noocan ahi waxay xaq u leedahay magdhow ah 20 maalmood oo mushahar ah sanadkii oo ay ka shaqeynaysay shirkadda ugu badnaan 12 bishiiba.
XIL KA QAADISTA SHAQAALAHA.
Cayrinta noocan ah waxaa la sameeyaa markay shaqada ka joojinta wadareedku bilaabato oo ay saamayso tiro aad u tiro badan oo shaqaale ah oo isla shirkad ka wada shaqeeya.
Waxaa loo arkaa cayrin wadareed markii:
10 shaqaale ah ayaa laga ceyriyay isla shirkadaas oo wadar ahaan 100 shaqaale ay mas'uul ka yihiin.
10% wadarta guud ee shaqaalaha ka shaqeeya isla shirkadaas oo leh tiro shaqaale ah inta udhaxeysa 100 ilaa 300 oo shaqaale ah.
30 shaqaale marka laga hadlayo shirkadaha leh in ka badan 300 shaqaale iyaga u shaqeeya.
Si la mid ah sida ujeeddada shaqada looga eryo, marka laga hadlayo shaqo ka eryidda wadajirka ah, waa inaad ku magdhawdaa ugu yaraan 20 maalmood oo mushaharkaaga ah muddo hal sano ah oo aad ka shaqeyso shirkadda oo leh xaddidan 12 bilood.
Caqabada xil ka qaadista ka timid, aan la aqbali karin ama aan waxba ka jirin.
Haddii ay dhacdo in shaqaaluhu uusan ku qanacsaneyn shaqo ka ceyrinta ay ku soo rogtay shirkaddii uu ka shaqeynayay, waxa ay tahay inuu sameeyo waa inuu la yimaado caqabad sharci, laakiin tan waa in lagu sameeyaa 20 maalmood oo shaqo gudahood, ayaa sheegay in loolanku la fulinayo iyadoo la adeegsanayo warqadda cod-bixinta ee heshiisiinta.
Kadib markuu sameeyo caqabada, garsooraha ayaa mas'uul ka ah inuu ku dhawaaqo xil ka qaadista sida ugu haboon, aan la aqbali karin ama aan waxba ka jirin. Haddii lagu dhawaaqo in la aqbali karo, waxay ka dhigan tahay in shirkaddu u hoggaansantay dhammaan shuruudaha sharciga ah si ay ugu caddeyso ceyrinta sababo la xiriira dhibaatooyin gudaha ah.
Ka dib markii la ceyriyay, suurtagal ma tahay in la helo shaqo la'aan?
Iyadoo aan loo eegin kiiska xil ka qaadista (anshax, ujeedo ama ujeedo) shaqaaluhu wuxuu kujiraa xaalad sharci oo shaqo la'aan ah oo sababtaas awgeed waad codsan kartaa dheefaha loo siiyay shaqo la'aanta sidaa darteed, waxaad xaq u leedahay inaad codsato dheefaha shaqo la'aanta ee adiga kugu habboon marka loo eego tabarucaadka aad uruurisay.
Waqtiga la codsanayo shaqo la'aanta, cayrinta waa in lagu aqoonsadaa iyadoo loo marayo shahaadada shirkadda. Haddii shaqaaluhu sameeyo dalab ku saabsan ceyrinta, waxaa loo qaddarin doonaa ficilka heshiisiinta, ha ahaato mid maamul ama mid sharci, si la mid ah waxay ku xukumi kartaa xukunka sharciga ah ee lagu caddeeyay cayrinta ku habboon ama aan caddaaladda ahayn.
Haddii ceyrinta ay cadaalad darro tahay, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la caddeeyo in loo-shaqeeyaha ama shaqaaluhu u qalmin dib u soo celinta.
XIL KA QAADIS LA'AAN.
Waxaa jira 2 sababood oo ka dhigaya ku dhawaaqista aan la aqbali karin xil ka qaadis:
1. Shuruudihii rasmiga ahaa ee sharci ahaan loo baahnaa lama buuxinin sabab kasta ha noqotee.
2. Xaqiijinta uu siiyay loo shaqeeye si sharci ah ugama doodi karo xil ka qaadis, taas oo ay ugu yeedheen "sabab sabab u ah shaqada.
Hoos waxaan ku taxnaa shuruudaha guud ee xil ka qaadista ay tahay inay lahaato, nooc kastoo aad tahay:
Go'aanka shirkadda ee ah in aysan sii wadin isticmaalkeeda waa in markasta qoraal loogu sheegaa shaqaalaha waana shuruud laga maarmi karo.
Sharax sababaha iyo xaqiiqooyinka jebinta ee lagu abaal mariyo shaqaalaha, haddii ay tahay arrinta edbinta edbinta; ama haddii ay tahay sabab shaqada looga eryay, sababaha keenay in la joojiyo shaqaalaha ay masuulka ka yihiin waa in la sharaxaa.
Taariikhda ay shaqo ka ceyrinta dhaqan galayso waa in la caddeeyaa, taasina waa inaysan ku habboonayn taariikhda go'aanka joojinta adeegyadooda la soo sheegay. Tusaale ahaan, shaqaalaha waxaa loo wargalin karaa dhowr bilood kahor kahor waqtiga kama dambaysta ah ee cayrinta.
Faylasha is burinaya waa inaan laga shaqeynin kiisaska anshax marinta wakiilada shaqaalaha ama ergooyinka shaqaalaha, iyo sidoo kale inaan la dhageysan shaqaalaha ay dhibaatadu saameysey, ama xubnaha ay ka kooban yihiin ururkooda. Iyadoo aan loo eegin inuu kani yahay wakiilka dukaanka oo ay shirkaddu ogayd xaaladdan shaqaalaha.
Haddii aan loo hoggaansamin mid ka mid ah shuruudahaan rasmiga ah waxay sababi doontaa in xil ka qaadista loo aqoonsado mid aan la aqbali karin.
Waa muhiim carrabka ku adkee in loo shaqeeyaha uu yahay kan looga baahan yahay inuu caddeeyo sababaha taasi oo ka muuqatay warqada xil ka qaadista.
Iyadoo aan loo eegin haddii shuruudaha rasmiga ah la buuxiyo, go'aanka dabar go’a waxaa loo fahmi doonaa mid aan la aqbali karin haddii shaqaaluhu uusan keenin cudurdaar ku filan sababta shaqada looga eryay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Warqadda shaqo ka joojinta aan cadaaladda ahayn
Ma ku noolaan kartaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah?
Haddii aad maal gashan lahayd 10 sano ka hor waxaad noqon lahayd milyaneer